IFVM sy ny ady amin’ny valala – IFVM
Raha tsiahivina ny ara-tantara dia naorina tao Betioky-Atsimo tamin’ny taona 1932 ny Foibe momba ny ady amin’ny valala.
Ity no « Tranomena »: izay trano naorina voalohany indrindra ao Betioky-Atsimo tamin’ny taona 1932 ho an’ny famonoam-balala ka mbola ampiasain’ny IFVM anketrihiny.
Ny IFVM dia orin’asam-panjakana manana fitantanana mahaleo tena, ao Mitsinjo Betanimena Toliara II FaritraAtsmio-Andrefana no misy ny Foibeny. Ny Minisitera eo anivon’ny Repoblika misahana ny Fambolena sy ny Fiompiana no miahy azy. Ahitana fitantanana telo lehibe ao anatin’ny Foibe : Fintantanana ara-teknika izay any Betioky no misy azy ; ny Fintanana ara-bola ary ny Fintantanana misahana ny fifandraisana ao Toliara. Tamin’ny 30 janoary 2017 no niforonany, araka ny didim-panjakana laharana 064-2017.
Ny IFVM dia misahana ny asa famonoam-balala sy ny mifandraika amin’izany eto Madagasikara. Miara miasa hampitombo ny vokatra araka ny tanjon’ny Ministera ary miaro ny fambolen’ny tantsaha amin’ny alalan’ny famonoana ny valala.
Ny tanjon’ny IFVM:
Ny tanjon’ny IFVM dia ny hampihena sy hitazona amin’ny fomba rehetra ny velaran-tany rakotra valala eto Madagasikara, hamono ny valala dieny mbola kijeja ary mamono avy hatrany izay valala hita rehetra.
Ny fomba fiasany
Ny fomba fiasan’ny IFVM dia ao anatin’ireto manaraka ireto :
Ady fisorohana mialoha
Fanamafisana ny fitiliana sy ny andry maso
Famonoana ny valala haingana sady mahomby
Fiarovana ny tontolo iainana sy ny fahasalaman’ny olona